Ankehitriny, Mahazo SMS Ny Ray Aman-dreny Rosiana Raha Mikaroka Ny ISIS Ety Anaty Aterineto Ny Zanany ISIS Online · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2016 12:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Ελληνικά, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Ankehitriny, afaka mandrafitra fanairana ireo ray amanèdreny ao Rosia raha vao manao zavatra mampiahiahy ety anaty aterineto ny ankizikely. (Sary an'i Lars Plougmann teo amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.)
Azon'ireo ray amandreny Rosiana ampiasaina atsy ho atsy ilay hafatra fanairana antsoina hoe “Anjely Mpiambina” mikasika izay jeren'ireo ankizy – sy tadiaviny – ao anaty aterineto.
Efa andalam-piasàna mikasika ilay rafitra vaovao fanairana ny ivon-toerana Rosiana ho an'ny Fandalinana ny Maha-ara-dRariny sy ny Fanoherana ara-Politika. Ilay rindrankajy dia afaka manara-maso ny zavatra ataon'ireo tanora aty anaty tambajotra sosialy ary mampitandrina ireo ray amandreny fa mety mampiseho fahalinana amin'ireo lohahevitra mahery fihetsika ny zanak'izy ireo, toy ny ISIS, fikambanana iray raràn'i Rosia toy ny mpampihorohoro.
Ny lehiben'ny ivon-toerana fikarohana, Yevgeny Venediktov, nilaza tamin'ny gazety Rosiana Izvestiya mpiseho isan'andro fa azony sary an-tsaina tsara ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianatra misoratra amin'ireo hafatra fanairana “Anjely Mpiambina”, ka ho “azo atrehana, na any an-trano, na any an-tsekoly” izay rehetra fitondrantena miala amin'ny mahazatra.
Ao an-tsekoly, efa afaka manomboka avy hatrany ny asa amin'ireo karazana ankizy tahàka izany ireo psikology sy mpiasa ara-tsosialy. Ka ho voafafa avy hatrany ireo vaovao alefan'ny zaza iray eo amin'ny “rindrin'ny” media sosialiny.
Venediktov manolotra ny hoe ilay rindrambaiko dia ho tairin'ny vontoaty toy ireo lahatsoratra, sary, ary lahatsary “mirakitra fitaovana radikaly” milaza ny fahalinan'ilay zaza amin'ny ‘fanaovana mahery fihetsika’. Ireo mpanaitra dia mety ahitàna ireo sarin'ny sainan'ny ISIS, ireo lahatsary mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny ISIS, hatramin'ny fomba fiteny sasantsasany, na fanodinana ireo fehezanteny “mahazatra ho an'ireo mpanjohy ny ISIS na ireo mpampiditra ho mpikambana” izay azon'ireo tanora ampiasaina any anatin'ireo fanehoankevitra na lahatsoratra ataony. Ireo teny fanamarihana na fehezanteny tahàka izany dia ho ampidirina amin'ny tànana ho ao anatin'ireo angon-drakitr'ilay rafitra.
Manao drafitra hanandrana voalohany ny fampiasàna ilay rindrankajy “Anjely Mpiambina” ao amin'ny faritr'i Novgorod ao Rosia ireo mpikaroka. Ny lohataona tamin'ny 2015, mpianatra iray avy ao amin'ny faritr'i Novgorod no voampanga ho nanao mahery fihetsika tety anaty tambajotra. Nandefa lahatsary iray ilay tanora 17 taona (nolazaina fa miaramila sy sivily novonoin'ireo mpikatroka mahery fihetsika tao Iràka) teo amin'ny pejy sosialiny, ary ankehitriny miatrika fanamelohana noho ny heloka bevava araka ny lalàna andininy faha-280 amin'ny Lalàna Rosiana famaizana ny heloka bevava. Ireo vesatra iampangàna noho ny antso hanao mahery fihetsika aty anaty mediam-bahoaka na amin'ny aterineto ao Rosia dia mety hahazoana sazy hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.
Ny filohan'ny filankevitry ny ray aman-drenin'ny mpianatra ao amin'ny iray amin'ireo sekolin'ny Great Novgorod ao an-toerana, nilaza fa efa vonona ny hanandrana ilay rafitra fanandramana izy.
Ao amin'ny kilasy fahavalo ny zanako, te-hiaro azy amin'ny fitaoman-dratsy avy amin'ny Aterineto aho. Amin'ny ankapobeny, matoky ny zanako aho, ary fitsirihana tokana monja isaky ny roa herinandro no ataoko eo amin'ny pejy media sosialiny. Saingy tiako kokoa raha tsy dia ahitàna fitaoman-dratsy mandeha amin'ny tambajotra, anisan'izany ny vontoaty manindrahindra ny ISIS.
Efa nandramana tany amin'ireo sekoly tany Angletera ihany koa ilay karazana fomba “fampitandremana mialoha” “Anjely Mpiambina” sosokevitry ny tao Rosia, maro tamin'izy ireo no manana rindrankajy “manohitra ny fiziriziriana” izay hahafahan'ireo mpampianatra mametaka marika amin'ireo sary mampiahiahy ampiasain'ireo mpianatra ary manadihady ny resaka ety anaty aterineto amin'ny fampifanoherana azy amin'ireo teny mifandraika amin'ny Jihadisma sy ny mahery fihetsika. Na izany aza, manampahaizana maro no nampitandrina fa ny tsindry atao amin'ireo sekoly mba hanarahany maso ireo mpianatra dia tsy fomba mahomby hanakànana ny fiziriziriana, fa vao mainka hampitodika ny tanora amin'ny vondrom-piarahamonina silamo sy ireo vondrona vitsy an'isa hafa.